Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Skåne län / Skurup
Degmada Skurups waxeey u dhaxeeysaa Ystad iyo Malmö waana degmo yar oo la jaar ah magaalooyin waaweyn. Xaafadaha Skurups iyo Rydsgård waxaa mara tareen aada Malmö/Köpenhamn/Kastrup iyo Ystad-Simrishamn. Garoonka diyaaradaha ee Malmö Airport waxuu kuu jiraa 18 km.
511 kiilomitir oo laba jibaaran
Ystad 24 kiilomitir
Trelleborg 37 kiilomitir
Malmö 39 kiilomitir
Degmada Skurups waxeey kuu heysaa guryo wanaagsan oo ka ag dhow dhul dabiici ah. Guryaha waxeey ka kooban yihiin fillooyin, guryo la kireysto. shirkada degmada Skurups waxaa la dhahaa Skurups hem.
Luqadaha ugu badan waa carabi iyo daari. Barida luqado waa la helaa haddii loo baahdo.
Degmada Skurups waxaa ku yaal kaniisada Svenska kyrkan. Axaa kaloo ku yaal jaaliyado isboortis iyo kuwo dhaqameed.
Bartamaha degmada Skurups waxaa ku yaal xafiiska shaqada iyo dukaamo kala duwan, bangiyo, farmashiiye iyo hool dabbaal oo caan ah. Dukaamada ugu waaweyn waxaad ku tagi kartaa lug waxeeyna ku yaallaan bartamaha. Xaafadaha Rydsgård, Skivarp iyo Abbekås waxaa ku yaal dukaan. Xaafadaha kaloo dhanna waxaa ku yaal makhaayado.
Degmada Skurups waxaa ku yaal iskoollkada xanaanada carruurta oo fara badan. Waqtiga sugitaankana wuu gaaban yahay, carruurtaadana isla markiiba boos waad u heleysaa.
Degmada Skurups waxaa afarteeda xaafadod ee Skurup, Slimminge, Rydsgård iyo Skivarp ku yaal dugsi hosedhexe. Dugsiga sare ee Nils Holgerssongymnasiet waxuu ku yaal Skurup.
Iskoolka dadka waaweyn waxuu k u yaal Nils Holgersson vuxenutbildning.
Skurup waxaa ku yaal rug caafimaad oo guud, rugta hoyada iyo dhallaanka, rugta carruurta iyo rugta ilkaha. Xaafadaha Rydsgård iyo Skivarp waxaa ku yaal rug caafimaad oo guud. Isbitaalka kuugu dhow waxuu ku yaal Ystad ca 2,4 mayl.
Turjumaanno carabi, daari iyo soomaali.
Sisteem fiican oo ah xaga tareennada iyo basaska ayaa ka jira Skurup waxeeyna ku geynayaan Malmö, Ystad, Lund iyo Trelleborg. Waxaa kaloo jira tareen toos kuu geynaya Köpenhamn iyo Svedala.Warbixin ku saabsan waqtiyada eey gaadiidyada kala duwan baxayaan iyo jadwalka safarka waxaad ka heleysaa Skånetrafiken.
Maadaama eey jiraan gaadiyo fiican oo aada degmooyinka waaweyn waxaa meelahaas ku yaal shaqa bixiyayaal iyo goobo shaqo oo badan.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Skurup